Kungakhathaliseki ukuba ucinga ntoni nge-ego, sonke sinokuvuma ukuba uKan West ungomnye wabakhiqizi be-hip-hop abahlala kunabo bonke ixesha . Enye yeempawu zakhe ezintle kukukwazi ukuvuselela isitayela sakhe kwaye kufumane iindlela ezintsha zokuthetha. Nangona uhlobo lokuvelisa lwemveliso luye lwavela kwi-albhamu kwi-albhamu, luyaziwayo kakhulu ngokutshintsha umdlalo ngeesampuli zomphefumlo. Ukuba uyayithanda loo nto ye-aesthetics yakhe, ngoko uya kuthanda abavelisi kuleluhlu.
I-Rakim yathonya i- Nas (ngokuqhelekileyo yiyo), njengokuba uJ Dilla wathonya u-Kanye West. Ngaphambi kokuba afe ngenxa yeengxaki ezinxulumene ne-lupus ngoFebhuwari 10, 2006, uDilla wayeyaziwa njengendoda eyayiphayona i-soul-hip-hop fusion eyenziwa yiYan West kunye nabanye. Kwisiko likaPete Rock, iDilla, ajika kwaye aguqula umphefumlo, i-funk, kunye neesampuli ze-blues kwindawo engabonwa ngabakhiqizi abambalwa.
Iinqununu Zinqumle: I-Pharcyde - "Runnin" "
I-albhamu ebalulekileyo: iiDonuts
J. Cole. © Roc Nation / Sony
UJoe Cole uya kuba ngowokuqala ukuvuma ukuba ufumanisa indlela yakhe yokuphila evela kuMnu. West. Uyakubona Iminwe yeminwe kuyo yonke isandi sezulu kunye kwaye.
Iinqununu Zinqumle : "I-Hi-Power" (iKendrick Lamar)
Ikhekhe Album : Born Sinner Ngaphezu »
Xa u-Oddisee ejoyina i-Halftooth Records njengomvelisi / MC, enye yemisebenzi yakhe yokuqala yayikuphefumula umphefumlo othile kwi-albhamu ethi Wordsworth esele ibuhlungu, i- Mirror Music . Ingqungquthela ye-Oddisee ye-albhamu ivelise i-CD engummiselo ophezulu we-CD, iphoqa i-Halftooth ukuba iphinde ifake i- Mirror Music njenge-albhamu yesi-2. Uveliso-olumkileyo, mhlawumbi osondele kakhulu ku- Kanye West kuleluhlu.
Iinqununu Zokunquma: I- Wordsworth - "Ukhokhele"
I-albhamu yokukhetha: Ukulwa okulungileyo
UNicolay noKay. © Nicolay Music
I-Hip-hop ibilokhu ihlala yinto yonke, idlula ixesha kunye nendawo kunye nokuncinciwa okuncinci ngemini, kwaye umkhiqizi waseDutch uNicolay uyilumkiso kule nto. Eyona nto ibonwayo ngokusebenzisana kwayo nge-intanethi kunye nePhonte (yoMzalwana omncinci), oxhonyiwe , uNic uhlala esebenzisa iipopu zepiyano kunye ne-basslines ezifudumeleyo zokudala iingoma zokubetha.
Iinqununu Zokunquma: Ukutshintshiselana kwamanye amazwe - "Ukunyaniseka"
I-albhamu yokukhetha: ixhunyiwe
Umvelisi / DJ RjD2 ungenye yeyona ndlela iphumelelayo ekudibaniseni umphefumlo, i-funk, kunye ne-rock 'n' roll kwisifanekiso esithile esisandi. Amacwe e-Ohio aphakanyisiwe kunye ne-stellar debut yakhe, i- Deadringer ka-2002, ngaphambi kokuba alandele ngokuqinileyo Njengoko Sasihlala Spoke iminyaka emibini kamva. I-alt-rap ibetha i-maestro isandul 'iqabane kunye ne-Soul Position partner yayo, i-emcee Blueprint, i-LP yabo yokutya, Izinto zihamba bhetele kunye no-Rj no-Al.
Iinqununu Zinqumle : RjD2 - "Ubumnyama kunye nezibuko"
I-albhamu ye-Choice: i- Deadringer
Nangona ungakaze uve ngoMzalwanzana omncinane uMzalisi we-9 Wonder, mhlawumbi uvile umsebenzi wakhe webhodi kwi-Girl's Destiny "Intombazana" kunye noJay-Z "Ingozi." I-9 inesimboli esisayinwe sisayinwe kunye nesiseko sokuvelisa i-bass esilungele ukusebenzisana kunye neentando zePete Rock, i-MOP, i-Buckshot, i-Wall, i-Mems, ne- Kanye West.
Ukhetho Lunqande: "Usaphila Ngokuphila"
I-albhamu yokukhetha: I-Minstrel Show
I-Metal Fingers Doom yinto enye eyayixhomekeke kumphefumlo we-Kanye West. Izitayela zakhe zokubetha izityambo ezivela emnyama kunye nostalgic ukuba ziqine kwaye zenzeke. Nje ngo-Kanye, i-Doom isebenza nge-mic njengempumelelo njengeebhodi, kodwa ingoma yakhe ingabonakala i-esoteric kubalandeli abatsha. I-dam, i-hip-hop iyintando yesifo somntu obuninzi, uye waphonsa amagugu njengoZev Luv X, uKing Geedorah, uViktor Vaughn kunye noDangerDoom.
Iinqununu Zinqumle: I- MF Doom - "Deep Fried Frenz"
I-albhamu ebalulekileyo: Mm ... Ukutya
I-Top 10 ye-Justin Bieber Iingoma
Imizekelo yeScientific Hypothesis
Umgaqo-23 weGalofu: Imithwalo yokulahleka
I-Big Quiz kwiMpawu zeNtengiso kwiSandi
Yiyiphi Intlukwano Phakathi Kokuhlukana Nokuxhatshazwa?
Isikhokelo segama lesiFrentshi
Njani iTall i-Flagstick eGoli? Ngaba Kukhona Ukuphakama Okufunekayo?
Usuku lokuQala lweKlasi: Ziziphi iimfuno zabafundi abanokuzijonga